OEM mpempe akwụkwọ metal laser ọnwụ akụkụ factory na suppliers | Ouzhan
Usoro mpempe akwụkwọ ahụ gụnyere ịchacha laser, nke kachasị na-eji lasers arụmọrụ dị elu ka ọ kanye ma belata ihe.
OEM mpempe akwụkwọ metal laser ịcha akụkụ-nkenke mpempe akwụkwọ metal laser ọnwụ nhazi akụkụ
Mpempe akwụkwọ metal ngwaahịa nwere àgwà nke ìhè arọ, elu ike, eletriki conductivity, ala na-eri, na ezi uka mmepụta arụmọrụ. Ha nwere otutu uzo eji eme ihe. A na-eji usoro nhazi n'ọtụtụ ebe na ngwa eletrọniki, nkwukọrịta, ụlọ ọrụ ụgbọ ala, akụrụngwa ahụike na mpaghara ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, na kọmputa, ekwentị mkpanaaka, na MP3, mpempe akwụkwọ bụ akụkụ dị oke mkpa. Na mgbakwunye, a na-eji ya n'ichepụta ngwaọrụ ọgwụ, yana ahụ ụgbọ ala na gwongworo (gwongworo), ụgbọ elu ụgbọ elu na nku, tebụl ọgwụ, ịtọ ụlọ (ihe owuwu) na ọtụtụ ngwa ndị ọzọ.
Ouzhan ahaziri akụkụ gosipụtara
Uru nke Shanghai Ouzhan mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ laser na-arụ ọrụ akpaaka
Laser ọnwụ nwere a elu ogo nke mgbanwe, ngwa ngwa ọnwụ ọsọ, elu mmepụta arụmọrụ, na obere ngwaahịa mmepụta okirikiri. Ma ọ dị mfe ma ọ bụ akụkụ dị mgbagwoju anya, enwere ike iji ya maka ịmegharị ngwa ngwa na ịcha site na laser;
Row Warara warara, ezi ọnwụ ọnwụ, elu ogo akpaaka, mfe ọrụ, ala oru ike, na ọ dịghị mmetọ;
● Ọ nwere ike ịchọpụta ịkpụ akwu na akwu na-akpaghị aka, nke na-eme ka usoro ihe eji eme ihe, ọ dịghị ihe ejiji ọ bụla, na ezigbo mgbanwe nke ihe;
Production Mmepụta dị ala na ezigbo uru akụ na ụba.
Ahaziri brass mpempe akwụkwọ metal laser ịcha igwe akụkụ
Ihe onwunwe Oyi efere akpọrepu, kpaliri efere, igwe anaghị agba nchara, dị ọcha aluminum na aluminum alloy, dị ọcha ọla kọpa na ọla kọpa alloy, igwe anaghị agba nchara elu nhazi technology
Ọgwụgwọ ihu A na-eme ọgwụgwọ dị n'elu dịka njirimara nke akụrụngwa na ihe ndị ahịa chọrọ iji nweta ọmarịcha mmetụta na-adịgide adịgide.
Main usoro Mpempe akwụkwọ igwe na-ekwe nhazi
Njikwa mma Njikwa Site na ngwungwu na nkwakọ ngwaahịa, usoro niile nke ịhazi igwe igwe na-achịkwa.
Ojiji Mgbucha laser, mkpọpu ala laser, ịgbado ọkụ laser, ọgwụgwọ laser, akara akara laser, ọgwụgwọ ọkụ ọkụ laser, ịgba ọsọ ngwa ngwa ngwa ngwa, imepụta laser na mkpuchi laser nwere ike ịhazi ya na Ouzhan.
Omenala Eserese Nabata CAD akpaka, JPEG, PDF, STP, IGS na ọtụtụ faịlụ faịlụ ndị ọzọ
Nke gara aga: Elu àgwà OEM mpempe akwụkwọ metal laser ịkpụ akụkụ
Osote: Mpempe akwụkwọ metal akụkụ polishing